रिस्टोरिल बनाम एम्बियन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार स्वास्थ्य कम्पनी कम्पनी, समाचार खेलहरु औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र प्रेस औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> रिस्टोरिल बनाम एम्बियन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो
रिस्टोरिल र एम्बियन दुई अनिष्टन औषधीहरू छन् अनिद्राको उपचारमा। अनिद्रा भनेको निद्राको विकार हो जसमा निद्रामा पर्दा, निदाउन, वा राम्रो गुणस्तरको निद्रा पाउन समस्या आउँछ। निद्राको अभावले बिरामीहरूलाई निद्रा र रुचि नभएको महसुस गर्न सक्छ, दैनिक गतिविधिहरूलाई गाह्रो बनाउँदछ।
अनिद्रालाई दुई किसिमले वर्गीकृत गर्न सकिन्छ: छोटो अवधिमा अनिद्रा केही दिन वा हप्ताहरू रहन सक्छ र सामान्यतया तालिका वा तनावमा परिवर्तन ल्याएर ल्याइन्छ, र दीर्घकालीन अनिद्रा तीन वा बढी रातहरूमा तीन वा बढी महिनाहरूमा देखा पर्दछ र व्याख्या गर्न सकिँदैन। जीवन परिवर्तन, औषधि वा अन्य ज्ञात कारणद्वारा। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले निद्रा सहायता औषधीहरू सुरू गर्नु अघि वातावरणीय परिवर्तनहरू र संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी सुझाव दिन सक्छन्।
रिस्टोरिल र एम्बियन दुबैले अनिद्राको उपचार गर्दछन्, यद्यपि तिनीहरू समान छैनन्। हामी उनीहरूको भिन्नता यहाँ छलफल गर्नेछौं।
रिस्टोरिल र एम्बियन बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
रेस्टोरिल (टेमाजेपम) एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो जुन अल्पकालिक अनिद्राको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। यो एक बेन्जोडियाजेपाइन एक शामक-सम्मोहनको रूपमा प्रयोग गरीन्छ। बेन्जोडियाजेपाइनहरू केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (CNS) डिप्रेसनन्टहरू हुन्। सीएनएस डिप्रेसनन्ट्सको परिणामले सिडेशन, सम्मोहन, एन्टिकोनभल्सेन्ट, र मांसपेशी विश्राम सहित धेरै प्रभावहरू हुन्छन्। यी प्रभावहरू गामा-एमिनोब्यूट्रिक एसिड-ए (GABA-A) रिसेप्टर्सहरूमा गैर-विशिष्ट बाइन्डि by द्वारा ल्याइन्छ जुन बहु ओमेगा सब्यूनिटहरू छन्, विभिन्न प्रभावहरूको लागि प्रत्येक जिम्मेवार। Or. mg मिलीग्राम, १ mg मिलीग्राम, २२..5 मिलीग्राम, र mg० मिलिग्रामको क्षमतामा रेस्टोरिल मौखिक क्याप्सूलको रूपमा उपलब्ध छ। रिस्टोरिल औषधि प्रवर्तन एजेन्सी (डीईए) द्वारा एक नियन्त्रित पदार्थ मानिन्छ किनकि यो आदत बन्न सक्छ र दुरुपयोगको सम्भावना हुन सक्छ।
एम्बियन (zolpidem) एक पर्चेको औषधि हो जुन छोटो अवधिको अनिद्राको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ, विशेष गरी बिरामीहरू जसको लागि निद्रा सुरु गर्ने र निद्रा कायम गर्न बाधा हो। अम्बियन GABA-A रिसेप्टरमा सकरात्मक मोड्युलेटर पनि छ तर बेन्जोडाइजेपाइन भन्दा फरक छ किनकि यो GABA-A रिसेप्टरको ओमेगा १ subunit को लागि विशेष गरी उच्च सम्बन्ध छ। एम्बियन एक बेन्जोडियाजेपाइन शामक-सम्मोहन हो। यस कारण यो बुझ्न सकिन्छ कि किन एम्बियनको एक प्रभावशाली प्रभाव छ, तर मांसपेशी विश्राम, चिन्ता, वा जब्ती गतिविधिमा कुनै प्रभाव छैन। अम्बियन मौखिक तत्काल रिलीज ट्याब्लेटको रूपमा mg मिलीग्राम र १० मिलीग्राममा उपलब्ध छ, साथै extended.२5 मिलीग्राम र १२..5 मिलिग्राममा विस्तारित रिलीज ट्याब्लेटहरूको रूपमा उपलब्ध छ। एम्बियन पनि एक DEA द्वारा एक नियन्त्रित पदार्थ को रूप मा विशेषता हो।
Restoril र Ambien बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग बेन्जोडियाजेपाइन गैर-बेंजोडाइजेपाइन शामक
जेनेरिक नाम के हो? टेमाजेपम Zolpidem
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक क्याप्सूल मौखिक तत्काल- र विस्तारित रिलीज ट्याब्लेटहरू
मानक खुराक के हो? सुत्ने समयमा mg० मिलीग्राम सुत्ने समयमा १० मिलीग्राम
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? केही दिन हप्ता महिना
अवस्थाहरू रेस्टोरिल र एम्बियनले उपचार गरे
रेस्टोरिल छोटो अवधिको अनिद्राको उपचारमा संकेत गरिएको छ। छोटो अवधिमा अनिद्रा सामान्यतया केहि दिन वा हप्ता सम्म रहन्छ र सामान्यतया कुनै खास तनाव वा निद्रा तालिकामा परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ।
एम्बीएन, यसको तत्काल रिलीज फारममा छोटो अवधिमा अनिद्रामा निन्द्रा शुरू गर्न कठिनाइ, वा निदाएको द्वारा विशेषता प्रयोग गरिन्छ। एम्बीएन सीआर, विस्तारित-रिलीज फॉर्मूलेसन, निद्रा र / वा निद्रा मर्मतको थालनी वा निदाएको समस्या द्वारा शुरू गरिएको अनिद्राको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
सर्त पुनर्स्थापना अम्बियन
छोटो अवधिमा अनिद्रा हो हो
दीर्घकालीन अनिद्रा (समस्याको थालनी गर्न वा सुत्दा समस्याको साथ) हैन हो
के रेस्टोरिल वा एम्बियन अधिक प्रभावकारी छ?
रिस्टोरिल र एम्बियन लाई एक प्लेसबो-नियन्त्रणमा तुलना गरिएको थियो प्रयोगसाला परिक्षण । यस परीक्षणमा trans०० भन्दा बढी बिरामीहरू ट्रान्जियन्ट, वा छोटो अवधिको, अनिद्रा सहितको थियो। जबकि दुबै औषधिहरू निन्द्राको दक्षतामा सुधारको रूपमा देखाइएको थियो प्लेसबोको तुलनामा, अम्बियन निद्रा सुरु भएपछि ब्यूँझाइहरूको संख्या घटाउनमा उत्कृष्ट थियो। अर्को शब्दहरुमा, बिरामीहरु लाई रेस्टोरिलको तुलनामा अम्बियनको साथ रातमा ब्यूँझने सम्भावना कम थियो। यस जानकारीलाई दिईएको छ, र यो विचारमा कि एम्बियनले मांसपेशिहरुमा आराम र जब्ती गतिविधिमा अनावश्यक प्रभावहरु लाई वेवास्ता गर्दछ, तपाइँको प्रेसिड्राइबरले तपाइँको छोटो अवधिको अनिद्राको लागि एम्बियन छनौट गर्न सक्दछ।
तपाईको चिकित्सकले मात्र यो निर्धारित गर्न सक्दछ कि कुन औषधि तपाई र तपाईको निद्राको विकारको लागि उत्तम हो। यो मेडिकल सल्लाह हुनु हो।
कभरेज र रस्टोरिल बनाम एम्बियनको लागत तुलना
रेस्टोरिल सामान्यतया वाणिज्य बीमा योजनाहरू द्वारा कभर गरिएको हुन्छ, तर मेडिकेयर औषधि योजनाहरूले सामान्यतया कभर गर्दैन। रेस्टोरिलको लागि बाहिरको पकेट मूल्य $ 60 को आसपास हो, तर सिंगलकेयरबाट कूपनको साथ, तपाईं सामान्य फार्मेसीमा लगभग $ १० लाई कम गर्न सक्नुहुनेछ।
एम्बियन सामान्यतया वाणिज्य बीमा योजनाहरू द्वारा कभर गरिएको छ, तर मेडिकेयर औषधि योजनाहरू द्वारा प्रायः कभर हुँदैन। ब्रान्ड-नाम एम्बियनको लागि बाहिरको पकेट मूल्य $ 600- $ 700 सम्म चल्न सक्छ। एकलकेयर कूपन जेनेरिक एम्बियन (zolpidem tartratean) को लागी धेरै फार्मेसीहरु मा मूल्य $ १ to कम गर्न सक्छ।
सामान्यतया चिकित्सा भाग डी द्वारा कभर? होईन, अपवाद योजना निर्भर छन् होईन, अपवाद योजना निर्भर छन्
मात्रा ,०, mg० मिलीग्राम क्याप्सूल ,०, १०mg तत्काल रिलीज ट्याब्लेटहरू
एकलकेयर लागत $ १०- $ $ 14- $ 29
रेस्टोरिल बनाम एम्बियनको साझा साइड इफेक्टहरू
रिस्टोरिल र एम्बियनसँग सम्भावित साइड इफेक्टको एक महत्त्वपूर्ण संख्या छ। दुखाइ, थकान, र घबराहट दुबै औषधीको साथ सम्भव छ। दुबै ड्रग्ससँग ह्याover्गओभर प्रभाव वा लागुपदार्थको भावनाका साथ बिरामीहरूलाई छोड्ने क्षमता छ, जसले दैनिक कामकाजलाई असर गर्न सक्छ। यस प्रभावबाट बच्न मद्दतको लागि यी औषधीहरू खाएपछि न्यूनतम आठ घण्टा निद्रा पाउने योजना बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ।
सपनाहरू, स्पष्ट सपनाहरू, र असामान्य सपनाहरू रेस्टोरिल र एम्बियनसँग सम्भव छ। केहि उदाहरणहरुमा, द्वि घातुमान खाने, यौन गतिविधि र अन्य असामान्य गतिविधिहरु को रिपोर्टहरु आएका छन् जबकि बिरामीहरु अझै सम्म निदाइरहेका छन् (निद्रावाट)। यी सम्भावित प्रतिकूल प्रभावहरू तपाइँको डाक्टरसँग छलफल गर्नुपर्दछ।
यसको उद्देश्य यी औषधिहरूको सबै सम्भावित प्रभावहरू सूचीबद्ध गर्नु हो। तपाईंको डाक्टरले अन्य सम्भावित प्रतिकूल प्रभावहरूको बारेमा छलफल गर्न सक्दछ।
तन्द्रा हो .1 .१% हो %%
टाउको दुखाई हो .5.%% हो परिभाषित छैन
थकान हो 8.8% हो परिभाषित छैन
नर्भस हो 6.6% हो परिभाषित छैन
सुस्ती हो %.%% हो %%
चक्कर हो %.%% हो %%
असामान्य सपना हैन n /aहो १%
मतली हो 1.१% हो परिभाषित छैन
ह्या Hang्गओभर हो २.%% हो %%
चिन्ता हो २.०% हो परिभाषित छैन
डिप्रेसन हो १.7% हैन n / a
सुख्खा मुख हो १.7% हो %%
पखाला हो १.7% हो %%
पेट दुख्ने हो १.%% हो दुई%
कब्ज हैन n /aहो दुई%
युफोरिया हो १.%% हो परिभाषित छैन
कमजोरी हो १.4% हैन n / a
भ्रम हो १.3% हो परिभाषित छैन
धमिलो दृष्टि हो १.3% हैन n / a
दुःस्वप्न हो १.२% हैन n / a
भर्टिगो हो १.२% हो परिभाषित छैन
एलर्जी हैन n /aहो %%
स्रोत: रिस्टोरिल ( डेलीमेड ) एम्बियन ( डेलीमेड )
रेस्टोरिल बनाम एम्बियनको ड्रग अन्तर्क्रिया
रिस्टोरिल र एम्बियन दुबैमा सीएनएस डिप्रेसनन्ट प्रभावहरू छन्, र उनीहरूका अन्य सीएनएस डिप्रेसनन्टहरूको साथ प्रयोगको कारणले एक थप असर पार्दछ जुन खतरनाक हुन सक्छ। विशेष रूपमा, ओपेट पेन्ड रिलिभरको साथ प्रयोगले गम्भीर श्वासप्रश्वासको अवसाद र सम्भवतः मृत्युसमेत निम्त्याउँदछ। सामान्य ओपिएट दुखाइ कम गर्ने कोडिन, हाइड्रोकोडोन, र ऑक्सीकोडोन समावेश गर्दछ।
क्याफिन, खास गरी यदि रेस्टोरिल वा एम्बियन लिनु भन्दा पहिले यो समयमा सेवन गरियो भने, रेस्टोरिल र एम्बियनको चाहेको असरहरूको प्रतिकार गर्न सक्दछ। क्याफिन औषधीय रूपमा रेस्टोरिल र एम्बियनको विपरित हो किनकि यसले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई उत्प्रेरित गर्छ।
सामान्यतया प्रयोग गरिने एन्टिहिस्टामाइन्सहरू, जस्तै बेनाड्रिल (डिफेनहाइड्रामिन) ले पनि निद्राको कारण हुन सक्छ र रेस्टोरिल र एम्बियनको साथ पनि दिनु हुँदैन किनकि यो थप्न सक्ने खतरनाक हुन सक्छ।
औषधि औषधि वर्ग पुनर्स्थापना अम्बियन
ऑक्सीकोडोन ओपिओइड दुखाइ कम गर्दछ हो हो
क्याफिन नक्कल गर्दै हो हो
क्विटियापाइन एटिपिकल एन्टिसाइकोटिक्स हो हो
Cetirizine एन्टीहिस्टामाइन्स हो हो
क्लोनिडाइन अल्फा एगोनिस्ट हो हैन
ट्रामाडोल Mu-opioid पीडा रिलिभर हो हो
ट्राजोडोन Antidepressant हो हो
सर्टलाइन चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू (एसएसआरआई) हैन हो
रिस्टोरिल र एम्बियनको चेतावनी
रस्टोरिल र एम्बियनको प्रयोगले अन्य सीएनएस डिप्रेशनन्टहरू, जस्तै ओपियोइड पेन्ड रिलीभरहरूसँग, गहिरो बेहोरापन, श्वासप्रश्वासको उदासी, कोमा, र मृत्युसमेत हुन सक्छ। रेस्टोरिल र एम्बियन सँगैको प्रयोगलाई उही कारणको लागि टाढ्नु पर्छ।
यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यदि औषधि सेवन गरेको of देखि १० दिन भित्र अनिद्रा सुधार हुँदैन भने, बिरामीहरूलाई अन्तर्निहित मनोचिकित्सक विकारहरूको लागि मूल्या be्कन गरिनु पर्छ जुन उपचार नगरिएमा निद्रा समस्यामा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।
यदि बिरामीले केही घण्टा ओछ्यानमा रक्सी खाईरहेको छ वा नियमित आधारमा त्यसो गर्छ भने रिस्टोरिल र एम्बियनबाट बच्न सकिन्छ। संयोजनले साइकोमोटर कमजोरीमा पुर्‍याउँछ जुन अर्को दिनसम्म रहन सक्छ, र ड्राइभि and र रिफ्लेक्स समय बिरामी हुन सक्छ।
अम्बियन वा रेस्टोरिल लिनु अघि, कृपया तपाईंको डाक्टरलाई कुनै पनि स्वास्थ्य अवस्था वा अन्य औषधीहरू दिनुहोस् जुन ओभर-द-काउन्टर औषधी र अन्य निद्रा औषधीहरू सहितको लागि सचेत गराउनुहोस्।
तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श नगरी अचानक रेस्टोरिल वा एम्बियन लिन बन्द नगर्नुहोस्। तपाईं वापसी लक्षण जस्तै आन्दोलन, चिन्ता, र डिप्रेसन अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
फ्याँक्न को लागी काउन्टर औषधि मा
रेस्टोरिल बनाम एम्बियनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
पुनर्स्थापना भनेको के हो?
Restoril एक प्रिस्क्रिप्शन औषधि हो जुन छोटो अवधिको अनिद्राको उपचारमा प्रयोग हुन्छ। यसलाई बेन्जोडियाजेपाइनका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ र यसको दुरुपयोगको सम्भावनाको कारण डिईए द्वारा नियन्त्रण गरिएको पदार्थ पनि मानिन्छ। यो मौखिक क्याप्सुलको रूपमा 7..5 मिलीग्राम, १ mg मिलीग्राम, २२..5 मिलीग्राम, र mg० मिलीग्रामको शक्तिमा उपलब्ध छ।
अम्बीएन एक पर्चेको औषधि हो जुन अनिद्राको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो एक गैर-बेंजोडायजेपाइन शामक औषधि हो तर अझै पनि डीईए द्वारा नियन्त्रित पदार्थको रूपमा लिइन्छ किनभने यसको दुरुपयोगको सम्भावनाको कारण। यो तत्काल रिलीज ट्याब्लेट फारममा mg मिलीग्राम र १० मिलीग्राम शक्तिमा उपलब्ध छ। यो विस्तारित रिलिज ट्याब्लेट फारममा पनि उपलब्ध छ (एम्बियन सीआर) strengths.२5 मिलीग्राम र १२..5 मिलिग्रामको शक्तिमा।
के रेस्टोरिल र एम्बियन एकै हो?
जबकि दुबै रेस्टोरिल र एम्बियनले अनिद्राको उपचार गर्छन्, तिनीहरू समान छैनन्। रेस्टोरिल एक बेंजोडायजेपाइन हो जसले मांसपेशिहरुमा आराम, आवेग र चिन्तामा पनि प्रभाव पार्छ। अम्बियन बेन्जोडियाजेपाइन हैन र अधिक विशिष्ट रिसेप्टर लक्षित छ र अनिद्रालाई लक्षित गर्दा यी प्रभावहरूलाई वेवास्ता गर्दछ।
के एम्बियन वा रेस्टोरिल राम्रो छ?
जबकि रेस्टोरिल र एम्बियन दुबै निद्राको दक्षता सुधार गर्न सक्षम छन्, अम्बियन निद्रामा परेपछि जागरण संख्या कम गर्नमा निकै राम्रो देखाइएको छ। यो दिईएको छ, र निद्रामा अधिक विशिष्ट गतिविधिहरू, अम्बियनलाई रेस्टोरिल भन्दा बढी मनपर्न सक्छ।
के म गर्भवती हुँदा रेस्टोरिल वा एम्बियन प्रयोग गर्न सक्छु?
रेस्टोरिललाई खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा गर्भावस्था कोटि X को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। यो गर्भावस्थामा contraindication छ र प्रयोग गर्नु हुँदैन। एम्बियन गर्भावस्था कोटि सी हो भन्ने संकेत गर्दछ कि त्यहाँ सुरक्षा र प्रभावकारिता प्रमाणित गर्न को लागी कुनै पनि नियन्त्रण नियन्त्रण छैन। अम्बेन केवल तब प्रयोग गर्नुपर्नेछ जब फाइदा स्पष्ट रूपमा जोखिमहरू भन्दा बढी हुन्छन्।
के म मदिराको साथ रेस्टोरिल वा एम्बियन प्रयोग गर्न सक्छु?
बिरामीहरूले रेस्टोरिल वा एम्बियन लिनबाट जोगिनु पर्छ यदि तिनीहरूले सुत्ने घण्टामा रक्सी खाएका छन्। महत्त्वपूर्ण साइकोमोटर कमजोरी सहवर्ती प्रयोगबाट परिणाम हुन सक्छ।
एम्बियन भन्दा कुन निन्द्री गोली काम गर्दछ?
Lunesta (eszopiclone) प्रस्तावहरू एम्बियनमा केही फाइदा यसमा यसलाई लामो अवधिको लागि सुरक्षित मानिन्छ, जबकि अम्बियन अपेक्षाकृत छोटो अवधिको प्रयोगको लागि हो। Lunesta निद्रा मर्मतको लागि अत्यधिक प्रभावकारी देखाइएको छ।
के रिस्टोरिल चिन्तामा मद्दत गर्दछ?
रेस्टोरिल बेन्जोडियाजेपाइन हो र यसलाई एनिओलिओलेटिक प्रभावहरू हुन्छन्, यसलाई एक प्रभावकारी चिन्ता-विरोधी औषधि बनाउने।
रेस्टोरिलले कत्तिको चाँडो काम गर्दछ?
तेमाजापामले लिने १ 15 देखि minutes० मिनेट भित्र काम गर्दछ र सुत्नको लागि इच्छित समय हुन १ 15 देखि minutes० मिनेट लिनुपर्दछ।
Nutrisystem आहार:5छिटो तथ्य तपाइँ जान्न आवश्यक छ
ADHD का लागि वेलबुट्रिन
रगत परीक्षणमा क्रिएटिनिन स्तर कम हुनुको कारण के हो?
लिपिटर र क्रेस्टर मा के फरक छ?
ranitidine र famotidine बीच के फरक छ?
इन विट्रो फर्टिलाइजेसन को लागी कति खर्च हुन्छ
Zantac एक प्रोटोन पंप अवरोध गर्ने औषधि हो